Kate Hudson bu ụzọ pụta n'ihu ihe omume ọha na eze mgbe ọkwa ọkwa banyere afọ ime
Onye a ma ama nwoke a dị afọ 38, bụ Keith Hudson, bụ onye ghọrọ onye a ma ama maka ọrụ ya na fim "Gold of Fools" na "Ụzọ E Si Kwụsị Nwatakịrị na Ụbọchị 10," na-adịbeghị anya mara ọkwa ime afọ nke atọ. N'agbanyeghị nke a, Kate na-aga n'ihu na-ekere òkè na nnọkọ ntụrụndụ, na njem a na nso nso a na Hong Kong bụ nkwenye.
Hudson tụrụ onye ọ bụla n'anya n'ụzọ dị mma
Otu njem na China maka nwanyị ahụ dị afọ 38 nwere usoro azụmahịa. A kpọrọ Kate ka ọ bụrụ onye ọbịa a na-asọpụrụ na mmeghe nke ụlọ ahịa ọla na-akpọ Harry Winston. Na ihe omume ahụ, Hudson pụtara na uwe mara mma mara mma nke e ji eji ákwà linin mee. Ngwaahịa a bụ elongated ekike nke nwere nnukwu neckline, a na-emeghe azụ na-eme ka ha ọnụ. Ihe kachasị mma bụ na nwanyị ahụ dị ime adịghị egosi akụkụ nke ahụ ya site na akwa akwa, na-eyiri uwe ya otu obere uwe elu nke agba agba.
Hudson na Hong Kong
N'ihe mgbakwunye na uwe ahụ mara mma, Kate nwere ike ịhụ akwa akpụkpọ ụkwụ dị elu, obere obere elekere na akwa ọla ndị nwere olu na mgbaaka, site na ụlọ Harry Winston. N'iji ejiji dị otú ahụ, onye omeebe ahụ emeghị ihe nlelị na-adọrọ adọrọ. Kate kwadoro onwe ya na mascara ojii na lipstick pink, na ntutu isi dị n'akụkụ aka nri.
Kate Hudson gosipụtara afọ ime ya na bikini
Kedu ka Kate Hudson si alụ ọgụ na ... iro?
Ndị na-eto eto nwere obi ụtọ na onyinyo Kate
Mgbe foto ya na onye na-eme ihe nkiri dị afọ 38 gosipụtara na Intanet, ndị ya na-ede akwụkwọ dere ọtụtụ nyocha dị mma banyere atụmatụ a: "Ọ dị mma ile Hudson anya, n'ihi na ọ na-eto eto. Ịgba afọ n'ihu ya, "" N'agbanyeghị eziokwu na anaghị m achọ ntutu isi ya, Kate dị jụụ na njide. N'agbanyeghi oke ejiji uwe, o gosiputara ya n'uzo di nwayo. Echere m! "," Ana m enwekarị mmasị Kate. Maka m, nke a bụ onye na-eme ihe nkiri kachasị mma ọ bụghị nanị na-egwu egwu na fim, ma marakwa otu esi ahọrọ uwe ndị dị mma. Ọdịdị dị na Hong Kong bụ nkwenye nke a. Enwere m obi uto! ", Etc.
Kate na ndị nnọchianya nke Harry Winston
Cheta, onye omere a ma ama site na 2000 ruo 2007 lụrụ Chris Robinson. Afọ anọ ka agbamakwụkwọ ahụ gasịrị, a mụụrụ di na nwunye otu ọkpara, onye aha ya bụ Ryder. Akwụkwọ akụkọ ọzọ bụ Hudson ọzọ bụ mmekọrịta ya na Matthew Bellamy, nke dịgidere afọ 4. Na 2011, ha nwere nwa nwoke a na-akpọ Bingham. N'afọ gara aga, Kate kwupụtara na ya na Danny Fujikawa, bụ onye guzobere Lightwave Records.
Chris Robinson na Kate Hudson
Kate Hudson na Matthew Bellamy
Kate Hudson na Danny Fujikawa
Jennifer Lopez na Marc Anthony: otu ogbo ma ọ bụ mmekọrịta ịhụnanya?
Justin Bieber mere egbu egbu n'ahụ ahụ dum
A na-ewepụ ihe eji eji eme Halloween "Kim Kardashian n'oge ohi" ka a kwụpụ ya
Ndụ onwe onye nke Margot Robbie
Catherine Zeta-Jones bipụtara vidio na-adọrọ mmasị na oge nke 100th anniversary nke Kirk Douglas
Hollywood Boulevard jupụtara na mkpịsị aka nke Katy Perry na Jeremy Scott
Mariah Carey na James Packer kwupụtara agbamakwụkwọ na-abịanụ n'àgwàetiti Barbuda
Ụmụ nwanyị Kim Kardashian ghọtara dị ka ndị na-eto eto kachasị emetụta
Ndị ọrụ Kesha weere ya dịka onye nzuzu
Jessica Biel na ụmụazụ ụmụ Saịlas na-ekerịta ihe
Ọgba n'etiti ezé
Egwuregwu maka akwụkwọ ozi
Chi kristal na-apụta - ihe kachasị ụtọ nri ntụ ọka na mpempe akwụkwọ maka ime ụlọ
Oatmeal pancakes bụ ntụziaka kachasị mma maka nri ụtọ ọ bụla!
Ejiri obi ọkụ
Nail imewe maka New Year 2017
Otutu nke asụsụ nne bu asusu - ihe omuma
Ugg akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị
Ego ole ka soro nwa na-aga na oyi?
Kedu otu esi ewere Lineks?
Mgbaghara na ụmụ ọhụrụ
Cress salad - ọma na ihe ọjọọ
Mgbụsị akwụkwọ kwachaa gooseberries
Ọrịa ahụhụ - oke
Ndị uwe ndị uwe ojii Kazak